O siri ike ịkọwa kpọmkwem oge ọrụ m kwadebere m maka ihe ịga nke ọma. Mgbe m nọ n'thetù Ndị Agha Mmiri, mgbe m bụ onye na-arụ ọrụ ọkụ eletrik, dịka injinia, abụkwara m onye ọkụ ọkụ. Edekwara m ESWS, asambodo ndị ọkachamara n'ịlụ agha agha nke nyere m nkọwa nke ọrụ na sistemụ niile dị n'ụgbọ mmiri m. Ihe omuma ahu na omuma ihe omuma bu ntoala nke ntozu onye ndu m.
Ruo afọ iri abụọ, arụọla m ọrụ n'ọkwá ndị ahịa na ndị isi na mba ahụ. Afọ iri abụọ gara aga, akporo m ọrụ bụ Elezie n'ime ahịa ngalaba, ma ugbu a, m na-ezute na agadi na-edu ndú karịa mgbe ọ bụla. Ihe kpatara nke a bụ na ahịa dijitalụ aghọwo ihe a pụrụ ịdabere na ya na onye amụma nke arụmọrụ ụlọ ọrụ.
Afọ iri abụọ gara aga, ahịa bụ n'ụzọ dị ukwuu otu ụzọ na-ebugharị akara na mkpọsa wee tụọ nzaghachi n'ime afọ. Ugbu a, ozugbo nyocha ahia na data n’egosiputa ihe ngosiputa isi oru obula - ma obu oru ndi oru, njide ndi ahia, ndoro-ndoro, wdg.N’ihi nke a, otutu ulo oru na-ego ndi isi ulo oru na mmejuputa ndi isi ochichi ndi n’eme ka ha tinye oru. ahia mgbali.
Isi ihe na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ bụ nkwụsị nke silos na iwu ala-eze n'ime nzukọ. N'ime ime ụlọ ahụike, ndị isi anaghị achọ ọdịmma onwe ha naanị - na-achọpụta na ịchụ àjà ndị a chụrụ na ngalaba nke ha nwere ike ibute mmụba nke ụlọ ọrụ. Mụ na ụlọ ọrụ enweela mkparịta ụka n’ezoghị ọnụ ma gwa m ya eweda ala mmefu ahịa dijitalụ mgbe anyị matara na ahịa ndị ọzọ na-eme nke ọma. A na-eme nke a mgbe ụfọdụ na mfu ụlọ ọrụ m - mana ọ bụ ihe ziri ezi ịme maka ahụike nke onye ahịa ahụ.
N'ime ụlọ na-adịghị arụ ọrụ, onye ndu ọ bụla na-alụ ọgụ ka ọ na-etolite n'isi ha, na-abawanye mmefu ego, ha na-elekwa ngalaba ha anya dị ka isi nke nzukọ ahụ. Nke a nọ na njedebe nke ha ebe ọ bụ na ngalaba niile ga-adị ndụ ma nwee ọganiihu. Bee mmepe ngwaahịa na ihe ọhụrụ na-anwụ, na-emebi ahịa na njigide n'ọdịnihu. Bee ahia na ahia ahia adighi aru ha. Kpụ ọrụ ndị ahịa na aha ịntanetị gị na-eri uru ahịa nke nzukọ gị. Belata uru gị na isi talent hapụrụ ụlọ ọrụ.
N'aka ozo, ahia gi gha adi nma na nghota site na nzuko a, ma ndi ozo gi na emeziwanye ihe banyere oru ahia gi. Nke a abụghị maka ịre ahịa na-eburu ụzọ, ọ bụ maka ịbupụta azụmaahịa n'ime nzukọ niile.